Ryan Handley – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Shazam! (2019) Unicode ဒီဟီးရိုးကတော့ မှျောအစှမျးကို အခွခေံထားတာပါပဲ။ Shazam လို့အျောလိုကျရငျ 14 နှဈသားကောငျလေးအဖွဈငးကနေ လူကွီးအရှယျ စူပါဟီးရိုးအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ မှျောဆရာအဖှဲ့ကွီးတဈခုရဲ့ နောကျဆုံးကနျြတဲ့ မှျောဆရာဟာ ကမ်ဘာကွီးကို နတျဆိုး ၇ ပါးရနျကနေ ကာကှယျထားရပါတယျ။ သူ့ရဲ့အစှမျးတှေ အားနညျးလာခြိနျမှာတော့ သူ့နရောကိုဆကျခံဖို့ စိတျထားကောငျးမှနျတဲ့ လူတဈယောကျကို ရှာဖှရေပါတော့တယျ။ ဒီဟီးရိုးကတော့ Justice League သာ ဆကျထှကျခဲ့ရငျ ပါလာနိုငျတာမို့ သူ့ရဲ့ မူလဇဈမွဈကို ဒီကားမှာ သခြောတှရေ့မှာပါ။ Credit Review Zawgyi ဒီဟီးရိုးကတော့ မှော်အစွမ်းကို အခြေခံထားတာပါပဲ။ Shazam လို့အော်လိုက်ရင် 14 နှစ်သားကောင်လေးအဖြစ်ငးကနေ လူကြီးအရွယ် စူပါဟီးရိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ မှော်ဆရာအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ မှော်ဆရာဟာ ကမ္ဘာကြီးကို နတ်ဆိုး ၇ ပါးရန်ကနေ ကာကွယ်ထားရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေ အားနည်းလာချိန်မှာတော့ သူ့နေရာကိုဆက်ခံဖို့ စိတ်ထားကောင်းမွန်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖွေရပါတော့တယ်။ ဒီဟီးရိုးကတော့ Justice ...
Skyscraper (2018) ဒီကားကို တခြားပေ့မှာ တင်ပြီးပေမယ့် တောင်းဆိုထားလို့ ကျွန်တော်လည်းကြိုက်လို မအားတဲ့ကြားက ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ် မကြည့်ရသေးသူများအတွက်ပါ ကြည့်ပြီးသူများ ကျော်သွားနိုင်ပါတယ် အမှားအယွင်းချွတ်ချော်လိုအပ်ချက်ရှိပါက ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါရန်….Skyscraper (2018) သည် IMDb 6.0/10 Rotten Tomatoes 47% Metacritic 51% Google users 90% ဒါရိုက်တာ Rawson Marshall Thurber ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဟာ အထပ် ၂၂၅ ထပ်ရှိတဲ့မိုးမျှော်တိုက်မှာ ရာဇဝတ်ကောင်တွေကြားမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ မိသားစုကို မီးလောင်နေတဲ့ မိုးမျှော်တိုက်ပေါ်ကနေ ဘယ်လိုတွေ ကယ်ထုတ်မလဲ တစ်ချိန်လုံး အသည်းတယားယား ရင်တဖိုဖိုနဲ့ ကြည့်ရမယ်ဇာတ်ကားလေးကို ခံစားကြည့်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ… Reviewed Credit
IMDB: 5.9/10 69,619 votes